Fampianarana mozika: vitaina ao anatin’ny fotoana fohy ny fiofanana | NewsMada
Fampianarana mozika: vitaina ao anatin’ny fotoana fohy ny fiofanana
Rehefa natao ny fanadihadiana teny anivon’ny fiarahamonina, anisan’ny mampalaina ny Malagasy ny fiofanana maharitra. Noho izany, nandritra ny fivorian’ireo mpampianatra zavamaneno malagasy no nanapahana hevitra fa hanome fiofanana ao anatin’ny fotoana fohy ry zareo. «… Na ao anatin’ny fotoana fohy aza ny fampitana fahalalana, tsy midika akory izany fa tandrametaka ny fiofanana. Fahalalana fototra ahafahan’ny mpiofana manatevina tsikelikely no atolotra azy. Izany hoe, fahalalana ahafahana mikaroka sy mianatra irery », hoy ny tomponandraikitra iray eo anivon’ny fikambanan’ny mpampianatra zavamaneno malagasy.
Raha ny fanazavan-dry zareo, misy mahatsara azy ny fiofanana fohy satria manefy tsikelikely ny sain’ny mpianatra hanao fikarohana tsy miato.
Mba tsy ho tafajanona antenantenany anefa ny fianarana mandeha irery ataon’ny mpianatra aorian’ilay fiofanana fohy, « hisy hatrany ny fiofanana tselika hahafahana mamaly ny fanontaniana nangonin’ny mpianatra sy mamaha ireo olana nolalovan’ny mpiofana tsirairay », hoy hatrany ny fanazavan’ireo mpampianatra.
Zavamaneno malagasy mahatratra 3 no iaingana ety am-boalohany, ny amponga sy ny sodina, ary ny valiha. « Mandrapahavitan’ny fifampiraharahana eo amin’ny efitra hampiasaina hanaovana ity fiofanana fohy ity, ny fampianarana valiha no efa afaka manainga. Handray mpiofana 15 izy ireo amin’izao voalohany izao », hoy hatrany ny tomponandraikitra.